May 27, 2019 - MM Live News
မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေအရမီးသတ်စခန်းရှေ့ယာဉ်မရပ်ရ . . အကယ်၍ရပ်မိခဲ့လျှင်
မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေအရမီးသတ်စခန်းရှေ့ယာဉ်မရပ်ရ . . အကယ်၍ရပ်မိခဲ့လျှင် မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေအရမီးသတ်စခန်းရှေ့ယာဉ်မရပ်ရ မီးသတ်ယာဉ်မှအပ အခြားမည်သည့်ယာဉ်မျှ မီးသတ်ယာဉ်စခန်း၊ မီးသတ်ရေပိုက်ခေါင်း၊ မီးသတ်ရေလှောင်ကန်နှင့် ၇ မီတာ (၂၃ ပေ)အကွာအဝေးအတွင်း ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်းမပြုရ ဟု မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၅၃ အပိုဒ်ခွဲ(ဋ)တွင်ဖော်ပြထားရှိပါသည်။ အကယ်၍ရပ်မိခဲ့လျှင်လည်း မိမိအမှားမို့တောင်းပန်ပါ ရိုကျိုးစွာအမှားကိုဝန်ခံပါ သို့မှသာ ယာဉ်မောင်းကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါမည်။ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကို အချိန်မှီကာကွယ်ပေးမည့် မီးသတ်ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် ရင်ထဲကနေ လေးလေးစားစားချစ်ခင်တန်းဖိုးထားပါ။ Credit ဒုရဲအုပ်ဌေးလွင်(ခ)နေမျိုးသူရ မျောတျောယာဉျနညျးဥပဒအေရမီးသတျစခနျးရှယေ့ာဉျမရပျရ မီးသတျယာဉျမှအပ အခွားမညျသညျ့ယာဉျမြှ မီးသတျယာဉျစခနျး၊ မီးသတျရပေိုကျခေါငျး၊ မီးသတျရလှေောငျကနျနှငျ့ ၇ မီတာ (၂၃ ပေ)အကှာအဝေးအတှငျး ရပျဆိုငျးခွငျး၊ ရပျနားခွငျးမပွုရ ဟု မျောတျောယာဉျနညျးဥပဒပေုဒျမ ၁၅၃ အပိုဒျခှဲ(ဋ)တှငျဖျောပွထားရှိပါသညျ။ အကယျ၍ရပျမိခဲ့လြှငျလညျး မိမိအမှားမို့တောငျးပနျပါ ရိုကြိုးစှာအမှားကိုဝနျခံပါ သို့မှသာ ယာဉျမောငျးကောငျးတဈဦးဖွဈပါမညျ။ ပွညျသူတှရေဲ့ […]
ဆာကူရာဆေးရုံ ‘လူနာသေးဆုံးမှု’ နောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်မှန် ဆေးရုံ ပိုင်ရှင်ဟောင်းမှ ပြောပြီ…….
May 27, 2019 May 27, 2019 MM Live News
ဆာကူရာဆေးရုံ ပိုင်ရှင်ဟောင်းမှ ပြောပြသည့် ‘လူနာသေးဆုံးမှု’ နောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်မှန် ဆာကူရာဆေးရုံ မှ လူနာသေးဆုံးမှု ကျွန်တော် ဆာကူရာဆေး ရုံ ပိုင်ရှင် မဟုတ်တော့သည်မှာ ၁၀နှစ်တိတိပင်ပြည့်ပါတော့မည်။ ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း လူနာရှင်တဦး၏ ခံစါးချက် ကို FB ပေါ်တွင် တွေ့လာရပြီး အခြေအနေ တွေ အားလုံး မှာ ဆေးရုံ အပေါ် ဝိုင်းပြီး အပြစ်တင်နေကြ တာ ကို တွေ့ လိုက်ရလို့ ဒီစါလေး ကို ရေး လိုက်ရခြင်းပါ ။ လူနာရှင်ရဲ့ စိတ် ခံစါး မှု ကို လည်း ဝမ်းနည်းစွာ နားလည်းခံစါးရပါတယ် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံက နာမည်ကြီး ဆေးရုံ တခု မှာ […]
ဘဏ်စာအုပ်ထဲက သိန်း (၅၀၀)ကျော် ပျောက်ဆုံးနေလို့ ကမ္ဘောဇဘဏ် မန်နေဂျာကို အမှုဖွင့်…
မေလ(၂၀)ရက်ကမုံရွာမြို့ကမ္ဘောဇဘဏ်(၁)မန်နေဂျာကိုမုံရွာမြို့မရဲစခန်းတွင်အမှုဖွင့်ထားပြီး ဘဏ်မှဖြေရှင်းပေးခြင်းမရှိလျင်သက်ဆိုင်ရာဖြေရှင်းသူအထိဆက် လျောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းယင်းမာပင်ခရိုင်ပုလဲမြို့နယ်မုံသွင်ရွာနေတောင်သူကိုဦးကမေလ၂၇ရက်ကပြုလုပ်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောလိုက်သည်။ “မေလ(၂၀)ရက်ကဘဏ်မန်နေဂျာကိုမုံရွာမြို့မရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားပါတယ်။အခု ကဘဏ်မန်နေဂျာနဲ့ပြောခဲ့တာတစ်လကျော်နေပြီ။ဘဏ်ကဖြေရှင်းတာမရှိရင် တော့ သက်ဆိုင်ရာဖြေရှင်းသူအထိဆက်လျောက်ရမှာဘဲ။´´ဟုဦးကိုဦးကပြောသည်။ မုံရွာမြို့ကမ္ဘောဇဘဏ်(၁)သို့ငွေကျပ်သိနိး၉၀၀ကျော်အပ်နှံထားသည့်အပေါ်ကျပ် သိန်း၅၀၀ကျော်ဘဏ်စာအုပ်တွင်လျော့နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍…. သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကိုမေလ၂၇ရက်နံနက်၁၀နာရီကမုံရွာမြို့ မြို့သစ်ရပ် ချင်းတွင်းအင်စတီကျူ့ရုံးခန်း တွင်ပြုလုပ်ရာ မုံသွင်ကျေးရွာမှတောင်သူဦးကိုဦးကရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ မုံရွာကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ(၁)တွင်၂၀၁၇ခုစက် တင်ဘာလ(၂၇)ရက်ကငွေစုစာအုပ် လုပ်၍ကျပ်သိန်း(၂၀၀) ၂၀၁၇ခုနိုဝင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့ကသိန်း(၃၀၀) ၂၀၁၈ခု ဇန်နဝါရီလ(၂)ရက်နေ့မှာသိန်း(၁၅၀) ၂၀၁၈ခုဧပြီလ၁၀ရက်နေ့မှာသိန်း(၅၀) နှင့် စက်တင်ဘာလ(၁၂)ရက်နေ့တွင်သိန်း(၁၉၀)စုစုပေါင်းကမ္ဘောဇဘဏ်သို့သိန်း (၈၉၀)သွင်းခဲ့ကြောင်းဦးကိုဦးကပြောသည်။ ၂၀၁၈ခုအောက်တိုဘာလ(၁)ရက်နေ့အထိသိန်း(၉၀၀)ကျော်ဘဏ်ကနေအတိုး နှုန်းတွက်ထားတာရှိပါတယ်။ဘဏ်မှာငွေဆက်စုဖို့ဆိုပြီး ဘဏ်ကိုဝင်ပြီးငွေစုတာ ဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့မေးတော့သိန်း(၄၀၀)ကျော်ဘဲကျန်ပါတော့တယ်လိှု့ဘဏ် မန်နေဂျာမကပြောတယ်။ဘဏ်စာအုပ်မှာလည်းထုတ်ရာမရှိဘူး။ မည်သူကိုမျလည်း ဘဏ်စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရော မှတ်ပုံတင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျ ငှားရမ်းတာထုတ်ခိုင်းတာလုံးဝမပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ စာအုပ်မှာထုတ်ရာလက်မှတ်လည်းမရှိပါဘူး။ငွေထုတ်ထားတာလည်းမရှိပါဘူး။´´ဟုဦးကိုဦးကရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ မေလ(၂၀)ရက်ညနေပိုင်းအချိန်တွင်ဦးကိုဦးက ဘဏ်မန်နေဂျာကိုအရေးယူပေးပါရန်တရားလိုပြုတိုင်တန်းသဖြင့် မုံရွာမြို့မရဲစခန်း(ပ)၁၀၆၂/၂၀၁၉ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၄၀၆ အရအမှုရေးဖွင့်ကာအမှုစစ် ရဲအုပ်အောင်ကျော်လွင်က စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေကြောင်းမုံရွာမြို့မရဲစခန်းကသိရသည်။ “ကျွန်တော်တို့သွင်းထားတဲ့ငွေလိုချင်တယ်ထုတ်ပေးပါပြောတော့ ပြဿနာဖြစ်နေတယ်စောင့်ပေးပါအုံးလို့ဘဏ်မန်နေဂျာကပြောတယ်။ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ ပေါ့ဆလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။စောင့်ပါအုံးပြောလာတာအခုတစ်လကျော်ကြာနေပြီ။ သူတို့ထုတ်သွားတာမတ်လ၁၉ရက်ကထုတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ သိတာကဧပြီလ၁၉ရက်ကမှသိတာပါ။ဘဏ်ကဆက်သွယ်မယ်ပြောပေမယ့်အခုထိ မဆက်သွယ်ပါဘူး။သူတို့ပြောတာကမန္တလေး(၄၂)လမ်းဘဏ်ခွဲကထုတ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။လိုင်စင်နဲ့ထုတ်သွားတယ်ပြောပါတယ်။ ဘယ်လိုစာအုပ်နဲ့လည်းမေး တော့ကျမမသိပါဘူး။မန္တလေးဘဏ်ခွဲဖြစ်နေလို့ပါလို့ဘဏ်မန်နေဂျာကပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကမန္တလေးမှာထုတ်တာတွေမထုတ်တာတွေမသိဘူး။၃လတစ်ကြိမ်အတိုးတက်ပေးမယ်ဆိုပြီးစုငွေအပ်တာပါ။ကျန်တာဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ငွေစုယုံသက်သက် စာအုပ်လုပ်ထားပါ။´´ဟုဦးကိုဦးကပြောသည်။ […]
ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ မစိမ့်ထက်ရဲ့ ရုပ်အလောင်း….
မစိမ့်ထက်ရဲ့ ရုပ်အလောင်း ယနေ့ညနေပိုင်းတောင်တက် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် အတူပူတာအိုမြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ဂျိုး (ပူတာအို)Myitkyina News Journal မစိမ့်ထက်၏ ရုပ်အလောင်းကို တွေ့ရှိရသည်နေရာမှာ အမြင့်ပေ ၁၁၈၀၀ ရှိ ရေကန်အနီးတွင် ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ တောင်ထိပ်မှာ ၁၄၀၉၅ ပေမြင့်ပီး ပြန်အဆင်း ခြေချော်ကျခဲ့သည့် အမြင့်ပေမှာ ၁၂၀၀၀ တွင်ဖြစ်သည်ဟု သိရပီး Body တွေ့ရှိရသည်မှာ အောက်ဘက် ပေ ၂၀၀ ခန့် အကွာတွင်သာ ဖြစ်နေသည်မှာ ရင်နာဖွယ်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေခြင်းအမှုကို ဘာမှ မလုပ်ပေးခဲ့ကြသလို စစချင်း ပြောကြားကြသည့် အပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားခြင်းမှာလဲ မဟုတ်မှန်ပါ။ ပုံစံအတိုင်း ပြန်လည်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍သာ အားစိုက် ရှာဖွေခဲ့ပါက သူ၏ ကံကြမာမှာ တမျိုးတဖုံအပြောင်းအလဲ ရှိသွားနိုင်သည်။ ယခုအခါ […]
၁၅ အရွယ်မိန်းကလေး အဒေါ်ဖြစ်သူက ခြေထောက်ကို ချုပ်ကိုင်ပေးပြီး သားမယားပြုကျင့်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်….
သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခံရသဖြင့် ဒလမြို့မရဲစခန်းသို့တိုင်ကြား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒလမြို့နယ်တွင် အသက်(၁၅)နှစ် ခန့် မိန်းကလေးတဦး အလိုမတူပဲ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခံရ၍ ပြန်ပြောပါက သတ်ပစ်မည်ဟု ပြောဆိုပြီး ဆီးခုံအား လက်ဖြင့်နှိပ် ခြေဖြင့်နင်းခြင်းအတွက် ဒလမြို့မရဲစခန်းတွင် တိုင်တန်းထားကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ တရားလို ဒေါ်စုမွန်လတ်(၃၄)နှစ်၏ လင်ပါသမီးဖြစ်သူ မငွေ(အမည်လွှဲ)သည် ယခင်က ဒေါ်ခင်သန်း ဆာပါချောင်ကျောင်းစု ရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နေသူနှင့်အတူနေထိုင်စဉ် အိမ်ထောင်ကျပြီး တစ်လခန့် ပေါင်းသင်း၍ ကွဲကွာခဲ့ပြီးနောက် ဒလမြို့နယ်၊ မှော်စက်ရပ်ကွက်ရှိ အဖွားဖြစ်သူ ဒေါ်မြစိန်(ခ)ဒေါ်ကုလာမစိန် နေအိမ်တွင် သွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီး…. (၁၅.၅.၂၀၁၉)ရက်နေ၌ တရားလိုအား ဒေါ်ခင်သန်းမှ မငွေ(အမည်လွှဲ)မှာ မူမမှန်၍ ဆီးစစ်ကြည့်ရန်ပြောဆိုသဖြင့် ဆီးစစ်ကြည့်ရာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်း သိရ၍ မေးမြန်းခဲ့ရာ လွန်ခဲ့သော(၂)လခန့် (နေ့ရက်မမှတ်မိ) နံနက်(၃)နာရီခန့် အဖွားဖြစ်သူ ဒေါ်မြစိန်၏နေအိမ်ပေါ်၌ အိပ်ပျော်နေစဉ် ဒေါ်မြစိန်၏ […]
ဆရာဝန်အမျိုးသမီးက ရွှေပြည်သာမီးသတ်ဦးစီးအပါအဝင် ဝန်ထမ်း ၁ဝ ဦးကိုပုဒ်မ ၄ခုဖြင့် အမှုဖွင့်
Zawgyi ရွှေပြည်သာမြို့နယ် မီးသတ် ဦးစီးမှူးအပါအဝင် မီးသတ်ဝန်ထမ်း ၁ဝ ဦးကို ဆရာဝန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပုဒ်မ ၄ ခုဖြင့် မေ ၂၅ ရက်က အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ရွှေပြည်သာမြို့မ ရဲစခန်းမှ သိရသည်။ ပုဒ်မ ၃၅၄ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှု၊ ၅ဝ၆ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ပုဒ်မ ၅ဝ၉ ကာယိနြေ္ဒကိုစော်ကားရန် ကြံရွယ်ပြောဆိုမှု၊ ၁၁၄ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကို အားပေးကူညီမှုတို့ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံထားရကြောင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးမှူး ဦးသွင်ယုနိုင်က ပြောသည်။ “ကျွန်တော်တို့ဆီက ဝန်ထမ်း ၁ဝ ဦးကို ပုဒ်မ ၄ ခုနဲ့ တရားစွဲထားတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကို အထက်ကလူကြီးတွေကို တင်ပြထားတယ်။ ကျွန်တော် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ပဲ ရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန် ၁ […]
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် လိပ်ခေါင်းသွေးပါ မီးကွင်းရှာအလုပ်ကများရသည်ကြား လိပ်ခေါင်းကြောင့် ဦးမိုး အတော်စိတ်ညစ်နေပုံရ၏။ မကြည်မလင်နှင့် လိပ်ခေါင်းသွေးပါသည်မို့ ပုဆိုးပင် သွေးကွက် ထင်နေလေသည်။ အမှတ်မထင် ကျေးဇူးရှင် တိုင်းရင်းသမားတော်ကြီးဦးကြွယ် ပေးသောဆေးနည်းကြောင့် သွေးကျလိပ်ခေါင်း (၇)ရက်ဖြင့် လိပ်ခေါင်ပြန်ဝင်အပြီးပြတ်၍ ယနေ့တိုင်သွေးကျခြင်း၊ လိပ်ခေါင်းထွက်ခြင်း မရှိတော့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ တိတိကျကျ မသိကြပါသော်လည်း အချို့သော အပင်တို့၏ ဆေးစွမ်းထက်မှုမှာ အံ့ဖွယ်အတိဖြစ်ရပါ၏။ လိပ်ခေါင်းအတွက် သောက်ဆေး (၁) မီးကွင်းဂမုန်း လက်တစ်ဆုပ်စာကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ထမင်းစားဇွန်း(၁)ဇွန်းစာ သတ္တုရည်ညှစ်ယူပါ။ (၂) ကြက်သွန်နီဥ (၁)ဥကို လေးစိပ်ထိုးပြီး ထမင်းစား (၁)ဇွန်းစာ သတ္တုရည်ညှစ်ပါ။ (၃) ထိုမီးကွင်းဂမုန်းနှင့် ကြက်သွန်နီတို့မှ ညှစ်ယူထားသော သတ္တုရည်(၂)ဇွန်းထဲသို့ သကြားလက်ဖက်စားဇွန်း(၁)ဇွန်းစာ ထည့်ပြီး နေ့စဉ် တစ်ကြိမ်သောက်ပေးလိုက်ပါ။ လွယ်လွယ်နှင့် မပျောက်ကင်းနိုင်ပါဟု […]
ကျမ ၂၄ မနက်က ဆိုင်ကယ်မှောက်တယ်ပေါ့ပေါင်ကွဲသွားတယ် ဒူးဂုံညင်းနေရာကချက်ချင်းပျော့ပျော့ကြီးနဲ့ ဖောင်းလာတယ် ဘာဖြစ်မှန်းတော့ မသိ ဖေ့ဘုတ်တွေမှာ အစိုးရဆေးရုံ မကောင်းတာတွေ ကြားနေရတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကိုပဲ ပို့ပေးဖို့ အခါခါပြောပေမယ့်ကားလိုက်မောင်းပေးတဲ့အကိုက အနီးဆုံးလှိုင်သာယာ အစိုးရဆေးရုံကိုပဲ ပို့ပေးပါတယ်။ အပ်ကြောက် အသားနာမှာကြောက်လို့လိုတာထက် ခယ တောင်းပန်ကာထုံဆေးဖြင့် ချုပ်ပေးပါ့ပြောလို့ ချုပ်ပေးပါတယ်ဒါတောင် ဒေါက်တာမဟုတ်ပဲ ချုပ်ပေးတဲ့သူက နည်းနည်းလေးဟောက်တာခံရသေးမဆိုးပါဘူး ဒေါက်တာနဲ့ Nurse မ လေးတွေ သဘောကောင်းပါတယ်။ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးတယ် ဓါတ်မှန်ရိုက်ပေးတယ် ဘာအရိုးမှ မကျိုးလို့ ဆေးရုံတက်စရာမလိုတဲ့နောက် ၁၀ ရက်အကြာ ချုပ်ရိုးလာဖြေဖို့ပြောတယ် ဘာအခကြေးငွေမှ မယူစေတနာရှိသလောက်ပဲ ဆေးရုံအတွက်လှုခဲ့တဲ့ဆေးစာရေးပေးတယ် ပီးတာနဲ့ ချက်ချင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ ကိုယ်ကလည်းဆေးရုံမတက်တာ ၁၅ နှစ်လောက်ရှိပီဘားမှမသိ နားမလည်လို့အပြင်ဆေးခန်းပြ ဆေးထည့်ဖို့မိတ်ဆွေအများက အကြံပေးလို့ ၂ ရက်အကြာမှာအပြင်ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းကြီးကို သွားခဲ့တယ်ါတ်မှန်ပြလိုက်တော့ဟာ […]
အလုပ်ပြုတ်တာကို မပြောရက်ခဲ့တဲ့ ယောက်ကျားဖြစ်သူကို အံ့သြစေခဲ့တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ထား…
သူအလုပ်ပြုတ်နေကြောင်းသူ့ ဇနီးကို မပြောပြရက် ခဲ့ပါဘူး မနက်ခင်းတိုင်းမှာ ပုံမှန်လိုပဲ မနက်စာစားပြင်ဆင်ပြီး သူ့ဇနီးလေးရဲ့ ပါးကိုနမ်းပြီး “ချစ်လေး ရေ အလုပ်သွားပြီ နော် ညနေမှပြန်တွေ့ ကြမယ် ကွယ် ”လို့ နှုတ်ဆက်တယ် သူ့ဇနီးလေးက လည်းပြန်နမ်းပြီး“စိတ်မကစားနဲ့ နော် အလုပ်ကို ဂရုတစိုက်လုပ် ပါနော် ” ပြောတယ်။ သူဟာ လိုင်းကားမှတ်တိုင်မှာသွားစောင့်ပြီးကားလာတာနဲ့ လူတွေကြားတိုးဝှေ့တက် သွားလိုက်တယ်။ကားမှတ်တိုင် ၃ တိုင်လောက်ကျော်ကျော်လာတော့ ကားပေါ်က ဆင်းတယ်သူပန်းခြံလေးတစ်ခြံထဲ က ခုံတန်းလျားမမှာ ထိုင်ချလိုက်တယ် သူ့မျက်နှာဟာ ညှိုးငယ်နေတော့ တယ် သက်ပြင်း တွေ တစ်ရှိုက်ပြီးတစ်ရှိုက် ချရင်း ငေးမော နေမိတယ်။ မျက်စိရှေ့ ကန်ရေပြင်ထဲ မှာကူးခပ်နေတဲ့ ငန်းမောင်နှံကို မျော်ကြည့်ရင်း နင်တို့ ဘဝလေးတွေက အားကျစရာကောင်းလိုက်တာ လို့သူညည်းတွားမိတော့တယ်။ […]